Tag: qoraalka xayeysiiska | Martech Zone
Tag: qoraalka xayeysiiska
Xayeysiimaha qoraalka ah ee Google la balaariyay (ETAs) ayaa si rasmi ah u nool! Qaabka cusub, ee ugu dheer ee mobilada-ugu horreeya ee xayeysiinta ah ayaa ka soo baxaya dhammaan aaladaha oo ay weheliso qaab-dhismeedka xayeysiiska caadiga ah ee desktop-saaxiibtinimo leh - laakiin waa waqtiga keliya. Laga bilaabo Oktoobar 26, 2016, xayeysiiyayaashu mar dambe awood uma yeelan doonaan inay abuuraan ama geliyaan xayeysiis qoraal ah oo caadi ah. Ugu dambeyntiina, xayeysiisyadan ayaa ku duugi doona taariikhda taariikh raadinta lacag bixintooda waxayna ka baabi'i doonaan bogga natiijooyinka raadintaada gebi ahaanba. Google waxay siisay xayeysiiyayaal